हाम्रो शत्रुलाई परास्त कसरी गर्ने? | BLOGSTREET
हाम्रो शत्रुलाई परास्त कसरी गर्ने?
Posted on December 22, 2016 by Rupesh Shrestha
डर मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। तर डर नभएको मानिस हुँदैन। हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै कुराको डर हुन्छ। प्रकट हुनु नहुनु फरक कुरा हो।
मानिसहरुको सामू बोल्नुपर्दा लाग्ने डर धेरैमा हुने डरमध्येको एउटा हो। त्यसैले त कतिपय अध्येताहरु डरलाई संसारकै सबैभन्दा धेरै मानिसमा हुने डरको रुपमा व्याख्या गर्दछन्। कतिपयले यसलाई मृत्युदेखिको डरभन्दा पनि ठूलो डर भन्दछन्। यहि डरका कारण धेरै मानिसले आफुले अपेक्षा गरेको प्रगति हासिल गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। डर सामान्य र स्वभाविक कुरा हो तर यसको परिणाम असामान्य र अस्वभाविक हुन सक्दछ। त्यसैले प्रगतिका लागि वा सफलताका लागि डरलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
‘मास’को अगाडि बोल्नुपर्दा लाग्ने डर नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा हो। निरन्तरको अभ्यासले डरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तरिका मिलाएर अभ्यास गर्ने हो भने यो डर नियन्त्रण गर्न धेरै समय पनि लाग्दैन।
पब्लिक स्पीकिङ् (भाषण कला) बारे तालिम दिन जुनसुकै खालको समूहमा पुग्दा पनि अधिकांसले सोध्ने प्रश्न नै डरसँग सम्बन्धित हुन्छ।
यसभन्दा अघि मैले भाषणको सुरुवात कसरी गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्नेबारे केहि भिडियो तयार पारेर देखाएको थिएँ। त्यसपछि मैले केहि भिडियो यहि डर कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा तयार पारेको छु। डर नियन्त्रण गर्ने केहि प्रभावकारी तरिकाहरुमध्ये पनि थोरै तरिकाहरुबारे मैले भिडियोमा चर्चा गरेको छु। तपाईंलाई काम लाग्न सक्छ भनेर ति भिडियो मैले यता पोष्ट गरेको हुँ। काम नलाग्ने देखिए मलाई भन्नुहोला, काम लाग्ने देखिए अरुलाई पनि बाँड्नुहोला है।
This entry was posted in In Nepali and tagged fear, public speaking, Training, video. Bookmark the permalink.
@SujitMahat1 @acharyapawan @sujitmainali नयाँ पत्रिकाको आउन लागेको टिभीको "टक शो" जस्तो देखियो नि! 38 minutes ago